Ungayidibanisa njani iPrinta engenazingcingo kwiLaptop yakho
Umshicileli ongenacingo uqhagamshela kwiLaptop yakho nokuba kungobuchwephesha obubizwa ngokuba yiBluetooth, efuna izixhobo ukuba zikufutshane okanye, ukuba unokufikelela kwinethiwekhi engenazingcingo, usebenzisa iWi-Fi (efumaneka kwizixhobo ezingaphakathi kweenyawo ezingama-50 ukuya kwi-100 okanye njalo) . Nalu uluhlu lwezinto ekufuneka uzazi xa useta ilaptop yakho ukuze uqhagamshele kumshicileli ongenazingcingo:
I-Bluetooth kunye ne-Wi-Fi ziindibaniselwano ezingafakwanga kumgama omfutshane (oko kuthetha ukuba kufuneka ube kufutshane nomshicileli ukuze uqhagamshele kuyo).
Ukuze usebenzise iprinta engenazingcingo esekwe kwiBluetooth, kungafuneka uqhagamshele umthumeli weBluetooth kwizibuko le-USB elikwi-laptop yakho. Esi sixhobo sisixhobo esincinci esimalunga nentonga yentsini ehambisa isiginali kumshicileli wakho. Ukuba uneLaptop eneWi-Fi, ungatsiba eli nyathelo.
Kuya kufuneka usebenze ngenkqubo yomsebenzi odlulileyo ukuseta umshicileli kwiPaneli yokuLawula yeWindows kwaye ufake naziphi na izinto ezifunekayo. Emva kokucofa ukuseta okuPhucukileyo kwePrinta kwiHardware yeHardware kunye nesandi, cofa iPrinta endifuna ukuba ayidweliswanga kwikhonkco, emva koko ukhethe Yongeza iBluetooth, i-Wireless, okanye iPrinta yeNethiwekhi kwibhokisi yencoko yokuqala ebonakala kwaye ulandele imiyalelo.
Yongeza iwizadi yePrinta ekuhambahamba kwinkqubo yokudibanisa ilaptop kunye nomshicileli; ungadinga ipasikhowudi (enikezwe nesiprinta sakho) koku.
Emva kokuba ufake umshicileli, kuya kufuneka ukwazi ukuprinta ngendlela obuya kwenza ngayo ngalo naluphi na olunye uhlobo lomshicileli, kodwa ngaphandle kobunzima bezingcingo ezongezelelweyo ezichitha idesika yakho.
Ukuba ungena engxakini, jonga imiyalelo yomshicileli wakho ngaphandle kwamacingo ukuze ufumane uncedo.
Ukuba ungumshicileli onamandla oPrinta oMoya, unokuprinta ngqo kwi-iPhone yakho, kwi-iPad, okanye kwisixhobo sokuchukumisa i-iPod. Jonga incwadana yomsebenzisi yoshicilelo lwakho ukufumanisa ukuba ingaba imodeli yakho inesakhono sokuyisebenzisa.
Ukuhambisa iziphumo ebezingalindelekanga zamanzi
zithini iziphumo ebezingalindelekanga ze-cetirizine
ubonakalisa njani amadlala
Ihlala ixesha elingakanani i-monistat
iziphumo ebezingalindelekanga ze-antivert